Gadzirirai kutamba chimwe chezvinhu zvinoshamisa Cheap car insurance Cash Games-Quick Fire Cash. With hunoshamisa Graphics uye Cowboy dingindira, hapana kuti mutambo uyu anoshayiwa. Iwe tora hakuna kana mbiri asi dzinokwana 13 mikana kukunda pane ichi chinoshamisa mutambo. Rino rakagadzirwa uye kugadzirwa IWG dziri yakakurumbira pakarepo uchitamba mutambo Developers ari indasitiri. IG ave rakagadzirirwa vamwe zvakanakisisa Slot Cash Games uye ivo kuratidza zvakare ukoshi hwavo Quick Fire. Kune zvina Mini-mitambo kuti mutambi anogona kusarudza kubva. Quick Fire wakagarira tikafunga munhu mashava emapuranga bhodhi. The Logo kunotaurwa nemabhii yendarama pamusoro chidzitiro. Pane mukana here kukunda kuti 6x multipliers zvose bheji. saka, mira kumirira uye kutanga achiridza rimwe yakanakisisa cheap car insurance mari mitambo kubudikidza kuti une.
Play cheap car insurance mari mitambo yakaita Quick Fire Cash uye kuhwina guru
Set pamusoro colour ane shava emapuranga bhodhi yose rugwaro nemifananidzo yakaitwa yendarama, ichi ndechimwe chezvinhu nyore asi anoyevedza achitarisa cheap car insurance mari mitambo. pane ina Mini-mitambo vane dzakawanda nzira dzakasiyana kuhwina. An Kuwedzera kune izvi multiplier ndiye anonakidza zvikuru nyaya mairi. Pane rakakura richakunda zvinogona iyo dzakasvikira 87.55% izvo zvinoreva kuti mumwe £ 100 muchaiswa £ 87,55 vari kudzoka.
The Gameplay pamusoro Quick Fire zviri nyore chaizvo. All unofanira kuita riri pokutangira iri, kumonera dhaiza. Izvi zvichaita kuziva multiplier kuti denderedzwa. Shure kwaizvozvo iwe uchava kutamba kuyambuka ina Mini-mitambo ndeinotevera:
mutambo 1- Iwe achapiwa emiti uye nekudzvanya pamusoro pavo achafukura zviratidzo. Unofanira kuwana akafanana zviratidzo zviviri chimwe musara kuhwina.
mutambo 2- Muizvi, muchaiswa mari kuti zvicharatidza nhamba. Mari mbiri achava nhamba dzakasiyana uye kana iwe wasarudza makuru chete, iwe kuhwina.
mutambo 3- Unofanira tinya dhora chiratidzo kuzarurira 2 nhamba. Kana kuwanda nhamba mbiri vakaenzana kuti 10 kuti mutambi muchawana.
mutambo 4- Unofanira tinya mari bhegi kuratidza yakawanda mubayiro mari kuti iwe dzakakundwa.
The multiplier panguva pokutangira chomutambo inowedzerwa mari yave akunda pakazopera rwakapoteredza. Nokudaro, unogona kukunda zhinji multipliers nokuridza cheap car insurance mari mitambo.
Graphics Great uye ruzha migumisiro nevamwe anonakidza Gameplay inoita Quick Fire imwe yakanakisisa cheap car insurance mari mitambo munguva yanhasi. The rakakura 87.55% RTP anongova imwe Cherry pamusoro keke. Uyu unofanira kuedza kana uchida vamwe kunakidzwa apo kuwana dzimwe mari kubva mairi.